Amerikanina Archives - Book News Madagascar
Tous les articles marqués “Amerikanina”
Publié janvier 25, 2018 par Book News
Sakana ho an'ny fampandrosoana ny tsy fisian'ny tamberin'andraikitra eto amin'ny firenena, hoy ny Masoivoho amerikanina, Robert Yamate, omaly, nandritra ny fanakatonana ny tetikasa "Tamberin'andraikitra eto Madagasikara: miainga amin'ny teoria mankany amin'ny fampiharana".
Manohana ny paikady hiadiana amin’ny fiparitahan’ny pesta ny Usaid
Publié octobre 12, 2017 par Book News
“Mianaka manerana ny faritra maro ny valan’aretina pesta eto Madagasikara. Hatreto, mbola tsy voafehin’ny fanjakana ny fiadiana amin’ity aretina ity. Eo anatrehan’izany, nanolon-tanana ny masoivoho Amerikanina amin’ny alalan’ny Usaid.” Pesta:…
“ Sehatra iray mbola mila tosika ny fanabeazana eto Madagasikara. Maro ireo tanora Malagasy no tsy afaka misitraka ny tolotra omen’ny fanjakana. Vahaolana ho azy ireo ny fahazoana vatsim-pianarana.” Fahalalana…